Inhloko Zendaba Mbimbitho 09, 2022
*** Uhulumende sekhuphule intengo yamafutha ezimota okwesibili phakathi kwensuku ezine esithi lokhu kubangelwe yikukhwela kwentengo emkambo womhlaba. I-liter yephethulo ikhwele isuka kuUS$1.52 yaya kuUS$1.67. Idizili yona ikhwele isuka kuntengo efanayo yaya kuUS$1.68.
*** Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhe intathelizindaba elwela amalungelo oluntu, uItai Dzamara wanyamalalayo,. Imuli yakhe, abangane lalabo asebenza labo baveza ukudana okukhulu besithi balethemba ukuba uzabonakala esaphila.
*** EleZimbabwe lilobelane leleKenya namuhla izivumelwano ezigoqela ezokusebenza ndawonye ukuthuthukisa umnotho wamazwe womabili, ezomvikela, ezokuvakatshelana, ukuthengiselana, kanye lokuthuthukisa impilo yabasakhulayo labesifazana.
*** Abadabuka eZimbabwe abanengi abaphansi kohlelo lweZimbabweans Special Permits, kabasoze benelise ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa ngenxa yokuthi kabangeni kunhlelo zonke zohlangothi lukahulumende olubona ngezethekeli lendaba zekhaya.
KuLivetalk namhlanje kuhlelo “Diaspora Forum” sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe.